Ukufakelwa kwamakhompyutha - kuyini? Ukwenza kanjani? Kubiza malini? Ungalinganisa kanjani?
Ukugqokwa kwekhompyutha iyindlela esezingeni eliphezulu futhi enhle kakhulu yokuhlobisa izingubo. Kuqukethe ukufekethisa okubhaliwe, uphawu noma i-logotype nokusetshenziswa kwentambo nomshini olawulwa yikhompyutha osusele esikhundleni sezandla namuhla.
Singakwazi ukumbathisa ngokoqobo noma yini futhi cishe noma yini. Ukufakelwa kwamakhompyutha kusetshenziswe ngempumelelo kuzo zonke izinhlobo zezindwangu, kwakha izingubo ezihlukile zenkampani. Izingubo ezigqokwa yizisebenzi zale nkampani zakha ubunikazi bazo, uhlobo nomqondo womphakathi. Bonke abasebenzi, njengabathandi bebhola abagqoke umfaniswano, badlala eqenjini elilodwa.
Vakashela isitolo sethu se-inthanethi >>
Ukufakelwa kwamakhompyutha nakho kungasetshenziswa ngempumelelo ekwenzeni amagajethi nezingubo zokukhangisa. I-logo ehlanganisiwe negama lenkampani kuma-T-shirts kanye nakumashizi kungaba yisipho esihle kumakhasimende. Ngokugqoka zethu zokuphromotha, bazothuthukisa umkhiqizo wethu.
Kodwa-ke, ukugqokwa kwamakhompiyutha akusetshenziswa kuphela ezingutsheni. Ungafaka futhi ikhompiyutha ngekhompyutha izigqoko, izikhwama, amathawula, izihlambi zokugeza kanye izingubo zomsebenzi.
Imidwebo nemilando efekethisiwe ihlala isikhathi eside kakhulu kunokukhishwa okulula nokusizakala kozakwethu, okuhlanganiswe nezingubo ezinjenge-decal ejwayelekile.
Ukufakelwa kwamakhompyutha - umlando wokuphrinta kwezingubo zokukhangisa
Sekuvele endulo, abesifazane bahlobisa amaphethini ezingutsheni nasendwangu yetafula ngesandla.
ukugqokwa imvamisa kuyinto yesiko kanye nophawu lwesifunda kanye nesizwe. Kwanele ukukhumbula imvunulo edumile yaseKashubi noma esezintabeni eziphakeme, okuyinto esehlukanisiwe yezingubo zabantu.
Ukuze uvelele isixuku ngale ndlela, futhi sikhombe amaqembu abantu, sisetshenziswe ngokushesha ngabezentengiso kanye nochwepheshe be-PR. Isisebenzi esigqoke ingubo ekhethwe kahle siphathwa ngendlela ehlukile yikhasimende. Isibonelo, njengoba abashayeli bezindiza, amaphoyisa namasosha ehlonishwa ngokugqoka umfaniswano wawo omuhle, abasebenzi bezinye izimboni babonwa ngendlela ehlukile ngokuphelele ngezingubo ezifanayo nezingubo ezihlukile. Shono izinkampani eziningi zithathe isinqumo sokutshala imali iyunifomu eyingqayizivele. Ngenxa yalokhu, abasebenzi babo bangazizwa njengeqembu elilodwa, bedlala ndawonye ngenhloso efanayo.
Ukufekethisa kusho futhi amagajethi nezingubo zokukhangisa. Wonke umuntu uthanda izipho, i-freebies noma imiklomelo. Uma ethola isikhwama, umphetho noma i-T-shirt enophawu lwenkampani, nakanjani uyosigqoka, ngaleyo ndlela ekhangisa uhlobo.
Ukuthuthukiswa komnotho kanye globalization yenza ukuthi ukufunwa kwezingubo zokufakelwa kukhule njalo ngonyaka. Ngenhlanhla, ukuthuthuka kwezindlela zamakhompiyutha kube nomthelela ekukhuleni okukhulu kwamathuba. Okwamanje, ukufakwa kombhalo namaphethini ezinhlobonhlobo zezingubo nezesekeli manje kushesha, kunembile, kunembile, kuyaphindeka futhi kushibhile. Namuhla, izinkulungwane zemibhangqwana zingenziwa ngaphandle kwezinkinga futhi ngesikhathi esifushane ukuhlangabezana ngisho nokulindelwe okukhulu kakhulu.
Ungayenza kanjani i-computer Embroidery?
Ukufakelwa kwamakhompiyutha - ubuchwepheshe bokufakelwa kombhalo ezingutsheni
Imishini yanamuhla ifakwe ngenaliti nangemicu yemibala ehlukene. Inqubo yokuthunga iphethwe ngohlelo lwekhompyutha. Ngokusekelwe kumklamo olayishiwe, umshini uthulula izinhlamvu nezinhlobo ezifanele.
Ungaklama kanjani imfekethisi, imichilo
Kwanele ukunquma ukuthi iyiphi indawo noma izindawo zento ofuna ukuyifanisa nayo. Ngaphezu kwalokho, ukukhethwa kwalo nosayizi kufanele kukhethwe. Imvamisa, imibhalo ebhalwe nge typeface efanelekile kanye nama-logo ezinkampani nezikhungo ayaphrintwa. Iphethini kufanele ithunyelwe kanye ne-oda, futhi ochwepheshe bethu bazosiza ukuyivumelanisa nezidingo zomshini wokuthunga wekhompyutha.
Izinzuzo zokufakelwa kwekhompyutha
Ukubukeka kuyinto eyenza izingubo ezifanekiselwe izifanekiselo ezigqokiwe. Ukuqokwa okwenziwe ngokucophelela kunika izinto ikhwalithi entsha. Kuzwakala lapho uthintwa, umane nje unesitayela. Ukugqokwa kwamakhompiyutha kunika isitayela sezingubo nezesekeli nobuhle, kanti uhlobo lomkhangiso luzuza ukuvelela. Cabanga izikibha ezimbili, enye enophawu lwendwangu olufakwe ngokucophelela kanti enye inezikhangiso zangaphakathi eziboshwe. Isithombe esinjalo sisikhumbuza ubumnandi be-Mercedes ebukekayo nenhle eduze kwepulasitiki nelishibhile.
Ngenxa yalokho, ukuqina kokufekethiswa okwenziwe ngekhompyutha kungcono kakhulu kunokwezimbangi zayo. Ukufekethisa kucishe kube nokuqina okufanayo nezingubo ezihlobisa. Asikho isidingo sokukhathazeka ngokuthi izifanekiselo noma okubhaliwe kuzophuma kugezwe noma ku-ironing. Ukufakelwa kwamakhompiyutha ingxenye eyingqayizivele yezingubo, futhi hhayi kuphela isesekeli esingasuswa kalula, esingesona unomphela esimilo saso esibukeka sidiliza ngokushesha.
Ukufakelwa kwamakhompiyutha kungaba njalo nangombala. Umkhawulo kuphela umbala wentambo esetshenzisiwe. Ukufekethisa kwenziwa ngokubonga ngokunemba kokulawula ikhompyutha.
Ukufekethisa kungenziwa komuntu uqobo. Ubuchwepheshe bekhompyutha buvumela ukubopha okucacile, okuphindaphindekayo kanye nokwenziwa okuphakeme kwamaphethini, izimpawu nokubhaliwe.
Ngamavolumu aphezulu, i-embroidery imane ihlawuleke ngokwezomnotho. Intengo yayo iphansi, okwenza ikulungele ukuhlobisa zonke izinhlobo zezingubo - amahembe, amahembe, ama-polos, amabhulukwe, izikhindi - kanye namathawula, izigqoko nezikhwama.
Okubi kokuhlanganiswa kwekhompyutha
Ngokuphikisana nokuphrinta okujwayelekile, okugcwele indawo ekhompyutheni, akunakwenzeka ukufaka isithombe ngokuphelele ngephalethi yemibala engenamkhawulo. Kodwa-ke, lokhu akusikho konke. Ukufakelwa kubhekiselwa kusiko, ukugqama kobukhosi, ngoba kuhlotshaniswa nezingubo zezingalo ezihlobisa izembatho zomphakathi ophakeme. Akusizi ngalutho ukupenda kitschy, ezimibalabala futhi tacky.
Ukufakelwa kwamakhompyutha - imikhiqizo edumile nezingubo zokukhangisa
Amahembe kaPolo anephethini elihlanganisiwe
Ukuhlangana kokuqala nembala? Isikipa esinekhola nophawu olufakwe kahle esifubeni. Inhlanganisela yobukhali nokugqokwa kwenduduzo. Yenza abantu bakujabulele ukugqoka izikibha ezinje nge-logo yenkampani noma yesikhungo sakho.
Ama-T-shirts anophawu lwenkampani ehlanganisiwe nemibhalo
Ilungele ukugqokwa nsuku zonke. Vumela abasebenzi bakho noma abathengi bakho ukuthi bakhangise brand yakho igqoke imikhono emifushane ehlotshiswe nge-logo yakho noma umbhalo obakhuthaza ukuthi basebenzise izinsizakalo zenkampani yakho.
I-t-shirt esezingeni eliphakeme nephethini efekethisiwe ekhompyutheni yinhlanganisela efanelekile ekuvumela ukuthi uvelele esixukwini sama-t-shirts amaShayina anekhwalithi ephansi neqinile.
Amashati ngephethini efekethisiwe
I-hoodie yakudala nayo ingakhangisa umkhiqizo noma umkhiqizo wakho. Faka i-password yakho, igama kanye / noma ilogo ku-sweatshirt.
Ukufakelwa kwamakhompiyutha eboyeni
Ngabe ufuna abasebenzi bakho bafudumale futhi ngasikhathi sinye bakhombe inkampani ngezingubo zabo? Noma mhlawumbe ufuna ukudala izingubo zentengiso ezisezingeni elifanele inkampani yakho? Uboya obufakelwe ikhompyutha buyindlela enhle.
Shizi ngombala wekhompyutha
Ihlelekile futhi yinhle kakhulu? Enza abasebenzi bakho bakhonze abathengi bengubo enhle nen logo yenkampani ehlanganisiwe. Khetha ukumboza kwekhompyutha kumahembe.
Amabhulukwe nezifushane ezinokuphrinta
Akuyona ingubo yaphezulu kuphela efanelekile ukufaka umbala noma iphethini. Faka umbala amabhulukwe noma izikhindi ukudala izingubo zokuphromotha ezihlukile.
Ukufakelwa kwamakhompyutha kwikhompiyutha
Kunzima ukucabanga nge-baseball cap ngaphandle kwelogo ehlanganisiwe yeqembu lakho olithandayo, eyunivesithi ethweswe iziqu noma igama lomkhiqizo. Yenza i-logo yesikhungo sakho noma yenkampani ivele shazi. Bembathise ezingubeni.
Amathawula nezinto zokugeza ezinomfanekiso ohlanganisiwe kanye nombhalo
Akukho okuzokwehlukanisa ihotela ne-SPA ngokulingana namathawula omkhiqizo nezinto zokugeza. Guqula amathawula angenagama, angenasici abe into eyingqayizivele egcizelela ukunethezeka komkhiqizo wakho. Kuhlonishwa wena, kepha futhi kunomuzwa wokunethezeka wezivakashi zakho.
Izikhwama ezifekethiswe ikhompyutha
Ungamaka kanjani isikhwama kalula ngegama ne-logo yenkampani? Ukugqokwa kwamakhompyutha kusebenza kahle. Ngaphandle kokubiza futhi ngokushesha, isikhwama esivamile singaphenduka isici esivelisayo senkampani yakho.
Izingubo eziyisixwayiso nokufakelwa kwekhompyutha
Izindwangu zomsebenzi zisebenza kahle njengesiphathi sokufeketha ikhompyutha. Igama, umsebenzi, igama lenkampani ne-logo - isembatho ku-Coverall noma enye into ekhethekile yomsebenzi nengubo ebonakalayo ephezulu.
Ukufakelwa kwamakhompyutha - kubiza malini?
Ukufakelwa kwamakhompyutha kushibhile. Kodwa-ke, kunzima ukucacisa ngokunembile inani lentengo yokugunda eyodwa, njengoba le ndleko ithonyeliswa ngamapharamitha amaningi.
Ukufakelwa kwekhompyutha kuzoba kushibhile iyunithi ngalinye kuma-oda amakhulu. Intengo ibuye ithonywe ngosayizi wendawo okufanele ifakwe, uhlobo lokufeketha ngokwalo, ubungako bephethini ebusweni, inani lemivimbo yenaliti ngo-cm.2 izinto ezibonakalayo, kanye nenombolo yezindawo lapho ukumfekethisa kufanele kubekwe khona entweni.
Intengo imvamisa ayithonywa yinombolo yemibala esetshenzisiwe, ngoba umshini wokuthunga unemicu eminingi.
Sikumema ukuthi wena ngokwakho uhlole amaphrojekthi. Sicela usithumele ihluzo ofuna ukuzihlobisa nolwazi mayelana nenani lezingcezu ezizokwenziwa.
5 / 5 ( 53 amavoti )
yini ukugqokwa kwamakhompyuthayini ukugqokwa kwamakhompyuthalapho ukwenza khona ikhompiyuthaukugqokwa kwamakhompyuthaisembozo samakhompiyutha i-BiałystokEmbroidery yekhompyutha Bielskoisembozo samakhompyutha ngedgoszczintengo yokufakelwa kwamakhompyuthauhlu lwamanani entengo ekhompyuthaukugqokwa kwamakhompiyutha ukuthi yiniukugqokwa kwamakhompiyutha ukuthi yiniukugqokwa kwamakhompiyutha eCzęstochowangekhompyutha embroidery gdańskEmbed yamakhompyutha Gdyniagliwice wamakhompyuthaU-Gniezno wembethe ikhompyuthaukugqokwa kwamakhompyutha ukuthi kubiza maliniukugqokwa kwamakhompyutha kubukekaukugqokwa kwamakhompyutha ukuthi ungaqala kanjaniukugqokwa kwamakhompyutha indlela yokwenzaEmbroid computerukugqokwa kwamakhompiyutha yini i-pkdisembozo samakhompyuthaKatowice wamakhompiyuthaukugqokwa kwamakhompiyutha ku-kielceisembozo sekhompyuthaukugqokwa kwamakhompyutha e Koszalinisembozo samakhompyutha uKrakowukugqokwa kwesikebhe sekhompyuthauhlu lwezintambo zesikebhe zokufakelwa kwamakhompyuthaEmbed yamakhompyutha Lublinukugqokwa kwamakhompyutha kuma-T-shirtsiziqalo zembobo yekhompyuthaukugqokwa kwamakhompiyutha i-Nowy Szczi-computer esetshenzisiweukugqokwa kwamakhompyutha ku-Opoleikhompiyutha ye-embroideryEmbroidery ikhompyutha poznańi-computer embroidery radomukugqokwa kwamakhompyutha kweRybnikukugqokwa kwamakhompiyutha okwenziwa ngemichiloisembozo ngekhompyutha SilesiaEmbroid yamakhompyutha Sizedupskukugqokwa kwamakhompyutha kwaSosnowiecEmbarariya embarari swarzędzukugqokwa kwamakhompiyutha okwenziwe ngekhompyuthaukuthungwa kwekhompiyuthaukugqokwa kwamakhompyutha eTarnówukugqokwa kwamakhompyutha eToruńi-computer yembobo yokuhlobisa amakhompyuthaUhlu lwamanani entengo yempahla yasekhompyutheniikhompyutha embroidery wrocławAmaphethini wokugqokwa kwamakhompiyuthaikhompiyutha imbala intaba eluhlazalubiza malini ikhompiyuthaindlela yokwenza imfashini yekhompyuthaungabiza kanjani ukugqokwa kwamakhompyuthaUkuhlobiswa kwekhompyutha kubukeka kanjaniindlela yokwenza i-computer Embroideryindlela yokuklebhulela imbobo yekhompyuthaindlela yokuklama ukugqokwa kwamakhompyuthaindlela yokwenza i-computer EmbroideryAmahembeamaphrintaizingubo zokukhangisaukuthunga